About Us - Zhejiang Yuking Teknolojia Co., Ltd
Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd. dia matihanina mpanamboatra sy ny mpanondrana izay mikasika ny famolavolana, ny fampandrosoana sy ny famokarana Auto Air Conditioning Compressor, ary ny sasany mifandray Auto A / C Parts. Rehetra ny vokatra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy ireo toetra tena sarobidy eo amin'ny tsena isan-karazany manerana izao tontolo izao.
Ny tsara-ampy fitaovana tsara kalitao trano sy ny fanaraha-maso manerana ny famokarana rehetra dingana manampy antsika mba hiantoka tanteraka mpanjifa fahafaham-po. Izahay manome miovaova sy isan-karazany ny Auto A / C Compressor sy Auto A / C ampahany amin'ny fontsika manontolo. Noho ny kalitao avo miavaka vokatra sy ny mpanjifa, ny vokatra dia efa hanondrana any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Azia Atsimo-Atsinanana, Afovoany-Atsinanana sy ny hafa firenena mifandraika.
Manizingizina isika ao amin'ny "Tsara Quality, tso-po Trust, ary tanteraka Service". Manahy ny mpanjifa ny manahy, nihevitra ny mpanjifa ny hevitra, manampy ny mpanjifa ny sahirana. Hitondra ny ara-toekarena isika izao tontolo izao ny mpividy. Amim-pahatsorana miandrandra ny manana lavitra ezaka sy ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa rehetra. Tongasoa misy namana mba hifandray antsika!